Geed lagula dagaallamayo isbedelka cimilada: Kiri | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Qabso co2, Deegaanka
Mid ka mid ah xalka dagaalka isbedelka cimilada iyo kuleylka adduunka waa kororka dhulka keymaha ah. Tani waa sababta oo ah geedaha waxay nuugaan CO2-ka aan ka sii daayo howlaheenna iyo gaadiidka. Inta badan meelaha cagaaran ee meeraha ku yaal, inbadan oo CO2 ah ayaa nuugi doonta.
Inkastoo xataa ilaalinta kaymaha iyo kordhinta hektaryadooda waxay muhiim u tahay mustaqbalkeenna, bani'aadamku wuxuu ku adkeysanayaa inuu baabi'iyo iyaga si ay u soo saaraan alwaax ama ula ganacsadaan. Dhamaan noocyada geedaha ee adduunka ka jira, waxaa jira mid si gaar ah nooga caawin kara wax badan dagaalka ladagaalanka isbedelka cimilada. Waxay ku saabsan tahay Kiri.
1 Xaaladda adduunka ee kaymaha
2 Geedka inaga caawiya ka hortagga isbedelka cimilada
3 Sidee lagu ogaa geedkan?
Xaaladda adduunka ee kaymaha
Meeraha oo dhan waa la jarayaa oo la burburinayaa qiyaastii 13 milyan oo hektar sanadkiiba sida lagu sheegay xog laga helay UN-ka. In kasta oo ay ku tiirsan tahay geedaha inaan ku noolaano oo aan neefsano, haddana waxaa naga go'an inaan baabi'inno. Dhirta iyo dhirtu waa sambabaheena waana sida kaliya ee aan ku noolaan karno maadaama ay bixiyaan oksijiin aan neefsanno.
Geedka inaga caawiya ka hortagga isbedelka cimilada
Geedkan naga caawin kara la dagaalanka isbedelka cimilada ayaa la yiraahdaa Kiri. Magaceeda sayniska waa geedka boqoradda ama Paulownia tomentosa. Waxay ka timaaddaa Shiinaha wayna imaan kartaa ilaa 27 mitir sare. Jirkeedu wuxuu u dhexeyn karaa 7 ilaa 20 mitir dhexroor wuxuuna leeyahay caleemo balac ahaan 40 sentimitir. Aaggeeda qaybinta badanaa waxay ka dhacdaa joog ka hooseeya 1.800 mitir wayna ku noolaan kartaa aagagaas ha ahaato mid la beeray ama duurjoog ah.
Geed leh astaamahan wuxuu u dhigmaa muuqaalka caadiga ah ee geed kasta. Laakiin waa maxay sababta ay Kiri gaar ahaan u awoodaan gacan ka geystaan ​​wax ka badan kuwa kale dagaalka ka dhanka ah isbedelka cimilada?
Dhammaan geedaha cagaaran, dhirta iyo geedaha yar yar ayaa sawir qaade ah, ka soo dhuuqa CO2 deegaanka si ay u beddelaan una sii daayaan oksijiinta. Si kastaba ha noqotee, ka mid ah astaamaha ka dhigaya Kiri mid gaar ah inuu noqdo musharraxan naga caawinaya ka hortagga isbeddelka cimilada waxaan ka helaynaa awoodeeda inaan ku sifeyno carrada aan fiicnayn ee ku hareeraysan iyo sidoo kale dhuuqitaankeeda CO2 wuxuu 10 jeer ka weyn yahay nooc kasta oo geed kale ah.
Sababtoo ah heerka nuugista CO2 aad buu uga badan yahay noocyada intiisa kale, sidaas oo kale ayaa ah heerka dhalinta oksijiinta. Mid ka mid ah faa'iido darrooyinka dhiraynta waa waqtiga ay ku qaadato geedaha inay soo baxaan oo ay lahaadaan aag caleen oo ku filan inay wax ku biiriyaan dheelitirka O2-CO2 ee meeraha. Si kastaba ha noqotee, Kiri ayaa aad uga dhakhso badan noocyada kale. Waa geedkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee koritaanka meeraha oo dhan ka jira, sidaa darteedna sidaas sideed sano oo keliya ayaa gaari kara dherer la mid ah geedkii ku dhowaad 40 sano jiray. Ma ogtahay waxaasi? Keyd ah 32 sano oo dhirayn ah. Sameynta isbarbar dhig si ay kuu siiso fikrad fiican, geedkaan wuxuu ku kori karaa carrada caadiga ah celcelis ahaan 2 sentimitir maalintii. Tani waxay sidoo kale ka caawineysaa iyada oo dib loo cusbooneysiiyo xididdadiisa iyo xididdada maraakiibta koritaanka, inay iska caabin karto dabka ka fiican noocyada kale.
Geedkani wuxuu leeyahay awood weyn oo dib-u-cusboonaysiin ah maadaama uu mar kale soo bixi karo ilaa toddobo jeer ka dib marka la jaro. Waxay sidoo kale ku kori kartaa carrada iyo biyaha wasakhaysan, marka sidaas la yeelo, waxay dhulka ka nadiifisaa caleemaheeda hodanka ku ah nitrogen-ka. Geedku inta uu nool yahay wuxuu daadinaayaa caleentiisa oo markay dhulka ku dhacaan wey qudhmeeyaan oo nafaqo ayey siinayaan. Waa inaan xusno in haddii geedkani ku koro dhul sumeysan ama nafaqooyin yar leh, koritaankiisu aad ayuu uga gaabin doonaa haddii uu ku baxo dhul dhexdhexaad ah oo barwaaqo iyo caafimaad leh. Si ay u sii noolaato oo ay si cadaalad ah ugu koraan carrada saboolka ah iyo kuwa xaalufiyey, waxay u baahan yihiin nidaamyo compost iyo waraab.
Sidee lagu ogaa geedkan?
Magaceeda waxaa loola jeedaa "jar" Jabbaan. Qoryihiisu aad ayey qaali u yihiin maxaa yeelay si joogto ah ayaa loo goyn karaa si loogu xagliyo koritaankiisa degdegga ah ugana faa'iideysto sida ilaha. Caqiidooyinka Shiinaha iyo dhaqankooda, geedkan boqortooyada waxaa la beeray markay gabadhu dhasho. Koritaanka degdega ah ee geedka awgeed, wuxuu la socon lahaa gabadha inta ay yartahay iyo horumarkiisa, si marka guurka loo doorto, geedka waa la jari doonaa oo qoryihiisa ayaa loo isticmaali doonaa alaabta nijaarnimada meherkeeda. .
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Geed lagula dagaallamayo isbedelka cimilada: Kiri
Kiri waxaa ku soo bandhigay Uruguay injineerka dhirta dhirta ee Josef Krall tijaabooyinkiina ma shaqeyn. Waxaa loo keenay koritaankooda degdega ah laakiin fungus lama qabsan iyaga. Waxaa jira noocyo oo kala duwanaanshahooda hidde uusan u oggolaanayn inay la qabsadaan
Jawaab Hugo Ferrari